COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 28 JOLAY 2021 - ewa.mg
News - Santé - COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 28 JOLAY 2021
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 28 JOLAY 2021 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.
Isan’ny nanaovana fitiliana: 511
Tranga vaovao: 30
3 Matsiatra Ambony
2 Amoron’i Mania
Tranga misy fahasarotana: 33
L’article COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 28 JOLAY 2021 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Fizahantany: hisy fihenam-bidy 10 – 50% ho an’ny Malagasy
Na tsy mbola resy tanteraka aza ny tranga Covid-19, ampirisihina ny Malagasy sy ny monina eto amintsika hitsidika bebe kokoa ny toerana mahaliana amin’ny fizahantany eto Madagasikara. Hanamorana izany, maro ny mpandraharaha eo amin’ity sehatra ity, manome tolotra zakan’ny fahefa-mividin’ny Malagasy, manao fihenam-bidy goavana, manomboka any amin’ny 10% ary misy mihitsy maherin’ny 50%. Efa hita any anaty site web ireo karazana tolotra ireo, ao amin’ny adiresy “Bon plan à Madagascar”. Maimaim-poana avokoa ny fidirana ao.Ahitana izany ny karazana mpisehatra amin’ny fizahantany isan-tsokajiny, toy ny toerana fandraisam-bahiny, ny fisakafoana, ny mpampanofa fiara, ny orinasa mpikarakara dia ho an’ny mpizahatany (agence de voyage sy Tour operateurs,…), sns. Nampidina ny karama raisiny koa ny mpitari-dia.Nanentana ireo orinasa sy mpandraharaha ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny fizahantany mba hanao fihenam-bidy, hisarihana ny mpanjifa sy hanarenana ny fizahantany eto an-toerana. Misahana ny fitantanana sy ny fanatanterahana azy ny Ofisim-pirenena misahana ny fizahantany eto Madagasikara (ONTM). Tsotra ny fampiasana sy ny famakiana ny antontam-baovao ao anatin’ity “site web” “bon plan à Madagascar” ity.Njaka A.L’article Fizahantany: hisy fihenam-bidy 10 – 50% ho an’ny Malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Befandriana Avaratra: jiolahy iray nahatrarana basy Kalach
Nahitam-bokany ny hetsika fampandriana fahalemana nandritra ny faran’ny taona nataon’ireo zandary ao amin’ny vondron-tobim-pileovana Sofia. Vokany, basy Kalachni­kov iray fampiasan’ny mpitandro filaminana miaraka amin’ny chargeur sy bala marobe no tratra tany amin’ny jiolahy iray nandritra ny hetsika nataon’ny zandary avy ao amin’ny tobim-paritra Ma­tson­dakana distrikan’i Befan­driana Avaratra ao amin’ny vondron-tobim-paritra Man­dri­tsa­ra. Taorian’ny famotorana nataon’ny zandary, natolotra ny fampanoavana avy hatrany ity jiolahy ity ka naiditra am-ponja vonjimaika. Nanamafy ny zandary fa mbola mitohy ny hetsika amin’ny fikarohana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika any am-pelatanan’ny dahalo.J.CL’article Befandriana Avaratra: jiolahy iray nahatrarana basy Kalach a été récupéré chez Newsmada.
MPIVAROTRA TENY SOAMANDRAKIZAY: “Voafitaky ny AB Event”
Mety nihena ny fatiantoka raha notanterahin’ny mpikarakara an-tsakany sy andavany ny fampanantenana nolaizany tamin’ireo mpivarotra teny Soamandrakizay. Tafakatra 150 % ny fahavoazanan’ny tsenan’ ireo mpivarotra, nanofa trano heva teny Soamandrikazay ny zoma 6 septambra 2019 ka hatramin’ny alahady 8 septambra 2019. 4000 “plats” isan’andro, isaky ny trano heva no nampanantenain’ny AB Event. Niomana tamin’izay toromarika izay ny mpivarotra kanefa zavatra hafa no niseho teny an-toerana, tsy azo novidiana ny sakafo satria potiky ny vovoka, simba vokatry ny fahatapahan’ny herinaratra. Nambaran’ny mpisolovava Maitre Tantely Ramaroson fa niharana famitahana avy amin’ny AB Event ireo mpivarotra arovany. Eo amin’ny fanomanana no nisy fitaka, hoy izy. Rehefa nidina nijery ny toerana ireo mpandray anjara dia nahita fa hanidina any amin’ny sakafo sy ny kojakoja ho ampiasain’izy ireo ny vovoka be teny an-toerana. Nampanantena anefa ny AB Event talohan’ny fandoavana ny hofan’ny trano heva fa hisy ny fandrarahana rano amin’ny vovoka ary hisy “produit” avy any Inde izay tsy mampihetsika ireo vovoka ireo ho ampiasaina. Raha tsy izay dia tsy nivarotra teny izy ireo kanefa tsy tanteraka akory izany. Tsy nisy ny tombom-barotra. Raha ny tombana dia 16 tapitrisa ka hatramin’ny 20 tapitrisa Ariary no nampiasain’ny trano heva tsirairay ankoatran’ny hofan-trano izay 600.000 Ariary farafahakeliny. Raha fanazavan’ny mpisolovava Maitre Tantely Ramaroson, mpiaro ireo mpivarotra, nandritra ny tafa ho an’ny mpanao gazety ny 10 septambra 2019 teny amin’ny Antaninarenina fa 170 ny isan’ny trano heva tokony hitsangana kanefa tafakatra 272 izany. Tsy nahazaka ny isan’ny trano heva ny herinaratra ka nitsonika ireo “fil” izay niteraka ny fahatapahan-jiro. Manginy fotsiny ny tsy fisian’ny rano ary raha mba nitaona rano avy any ivelany ireo mpivarotra dia tsy nahazo niditra. Maniry ny hamerenana ny hofan’ny trano heva farafaharatsiny ireto niharam-pahavoazana ireto. Raha tsy izany dia hampiakatra ny raharaha eny amin’ny fitsarana. Nomarihany fa tsy manana olana amin’ny katolika sy ny fanjakana izy ireo. Nirina R. Cet article MPIVAROTRA TENY SOAMANDRAKIZAY: “Voafitaky ny AB Event” est apparu en premier sur déliremadagascar.
Fisorohana valanaretina :: Razana nodorana tany Antsiranana
Nandraisan’ny manampahefana fanapahan-kevitra ny fandoroana razana iray tany Antsiranana, afak’ omaly, satria namoy ny ainy vokatry ny tsimok’aretin’ny Covid-19 io lehilahy io, tamin’ny 8 septambra lasa teo. Nodorana tany amorondranomasin’ny nosy Lonjo, ny harivan’ny andro nahafatesany ihany, ny razana. « Toy ireo olona hafa namoy ny ainy vokatry ny valanaretina dia tokony ho nalevina tany AntazoalavaAntanifotsy, eto an-drenivohitr’Antsiranana, io lehilahy 65 taona maty io, saingy niarahana nifanapahana tamin’ny fianakaviana ny fandorana ny razana tany Ambalakazaha. Natrehan’ny Birao monisipaly misahana ny fahadiovana ao amin’ny kaominina, sy ny vadintany ary zandary ny fanatanterahana izany », araka ny nohazavain’ny loharanombaovao any Antsiranana. L’article Fisorohana valanaretina :: Razana nodorana tany Antsiranana est apparu en premier sur AoRaha.
Kaominina tsy misy kandidà : hisy fifidianana manokana
Hatramin’izao, vitsy ny fametrahana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina eny anivon’ny Ovec, izay hifarana anio. Manoloana izany, milaza ny Ceni fa mety hisy ny fifidianana manokana amin’ny ampahany amin’ireo kaominina tsy misy kandidà. Amin’izany, tsy mitsaha-manentana ny Ceni ny mba tsy hiandrasana ny ora farany ny fametrahana ny firotsahan-kofidina.“Eto no anentanana ny antoko politika, ny vondron’ny antoko politika hanafaingana ny any anatin’ireny antoko sy ny vondrona politika ireny. Na ny tsy miankina koa aza, mba tsy hitaredretra satria tena ilain’ny fifidianana ara-demokratika ny hisian’ny kandidà isaky ny fari-piadidiam-pifidianana.” Io ny nambaran’ny mpampaka-tenin’ny Ceni, Razafindraibe Ernest, momba ny fametrahana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina kaominaly, hifarana anio. Ny kaominina izay miisa 1 695 no fari-piadidiam-pifidianana: tokony hisy kandidà avokoa, na ny ben’ny Tanàna izany na ny mpanolotsain’ny Tanàna.Mba hisy fifaninanana tsara ny fifidiananaEntaniny koa ny kandidà ben’ny Tanàna hijery kandidà mpanolotsaina. Fifidianana misaraka na roa samy hafa ireo, nefa tsara misy kandidà mpanolotsaina ny kandidà ben’ny Tanàna ao anatin’ny fari-piadidiam-pifidianana iray. Mba ho hita taratra tsara ao anatin’ny fifidianana ny fisian’ny hoe firotsahan-kofidina malalaka hisian’ny fifaninanana tsara.Tsy tokony hiandry fotoana farany vao tonga fa raha misy antontan-taratasy mbola mila amboarina, ohatra: tsy hanana fotoana intsony ny kandidà amin’izany. Tsy vao izao akory no nahafantarana fa tokony hiroso amin’ny fifidianana ben’ny Tanàna amin’ity taona ity. Satria fantatra tsara fa efa-taona ny fe-potoam-piasan’ny ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsain’ny Tanàna.R.Nd. L’article Kaominina tsy misy kandidà : hisy fifidianana manokana a été récupéré chez Newsmada.
Saiky manerana ny lalam-pirenena: lasibatry ny fanafihan-jiolahy hatrany ny taksiborosy
Mirongatra ny fanafihan-dahalo eny amin’ny lalam-pirenena. Lasibatra tamin’izany ny karandalana iray saika hihazo an’i Betroka teo amin’ny fokontany Ampandrana, 20 km, atsimo tsy idirana an’i Betroka, ny alahady teo tokony ho tamin’ny 03 ora maraina. “Fiara roa nanao caravane no notafihan’ireo dahalo ka voatifitra tamin’izany ilay fiara tao aoriana saingy tsy nisy nijanona izy ireo”, hoy ny fanazavan’ny polisy ao an-toerana. Tsy nisy voaroba ireo fiara mpitatitra saingy feno diam-bala kosa ny karandalana. Vaky ny “pare-brise”ary naratra teo amin’ny handriny ny mpamily. Tsy nisy ny aina nafoy ary nanohy ny lalany avy hatrany ny mpitatitra taorian’ny fitsaboana. Nilaza ireo polisy ao an-toerana fa tsy maintsy mivondrona sy miaraka amin’ny mpitandro filaminana ireo taksiborosy vao afaka mandeha amin’ny alina. Ankoatra io, voatafik’ireo andian-jiolahy teo anelanelan’i Beronono sy Kianja (RN7) ny taksiborosy Sprinter iray, ny asabotsy hifoha alahady teo. Lasa avokoa ny vola sy ny entana ary zava-tsrobidy isan-karazany. Nisy naratra ihany koa ny mpandeha. Fiara Sprinter iray sy 4×4 iray no nametraka ireo jiolahy ampolony mirongo basy teo an-toerana, hoy ny loharanom-baovao iray. Etsy ankilany, taksiborosy iray hihazo ny renivohitra no voatora-bato teo Menabe Lovainjafy-Ambatolampy. Nametrahan’ireo jiolahy nirongo “bois rond” sakana teny amin’ny arabe.Henintsoa HaniL’article Saiky manerana ny lalam-pirenena: lasibatry ny fanafihan-jiolahy hatrany ny taksiborosy a été récupéré chez Newsmada.
Fandaharanasa AD2M: fanjarian-tsakafo any Menabe
Fandaharanasa eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Minae) ny Tantsoroka ho an’ny fampandrosoana any Menabe sy Melaky (AD2M). Miditra amin’ny andiany faharoa ankehitriny ity fandaharanasa ity, mifantoka amin’ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Nambaran’ny mpandrindra ny AD2M, Razafindriaka Mamiharitiana, fa kendrena manokana ireo fianakaviana sahirana sy marefo, tohanana amin’ny lafiny famokarana maharitra mba ho lovainjafy. Ao anatin’izany koa ny fanatsarana ny lafiny fotodrafitrasa ara-pambolena, toy ny fananganana tohodrano, fanajariana lemaka, fanatsarana ny lakandrano, sns. Tohanana koa ny mpamokatra hikarohana lalam-barotra, mba ahafahan’izy ireo mivarotra ny vokatra araka ny tokony ho izy, mba tsy ho hararaotin’ny mpanangom-bokatra, izay mbola mametra ny vidiny sady ambany, amin’izao fotoana izao.Fambolena sy fiompiana vaovaoNanamafy ny minisitra lefitry ny Fiompiana, ny Dr. Raymond, anisan’ny paikady vaovao raisina ny fanovana ny fomba fambolena sy fiompiana. Singanina amin’izany ny fambolena vilona ho an’ny biby fiompy, mba tsy hiantehatra amin’ny kijana nentim-paharazana, anisan’ny nampirongatra ny doro tanety hatramin’izay. Efa an-dalana ny fanatanterahana izany any amin’ny faritra Menabe. Eo koa, ny fifehezana ny rano izay efa miharitra ny loharano sy ny renirano, vokatry ny fiovan’ny toetr’andro. Manampy ireo ny fampiasana ny fambolena biolojika, tsy mampiasa ny akora simika (fanafody sy zezika), izay manimba ny nofon-tany. Paikady vaovao tanterahina any an-toerana koa ny fanomezana tany ny mponina ho an’ny famokarana mitsinjo ny tontolo iainana, “titre vert”.Nandray anjara mivantana tamin’ny fihaonamben’ny fambolena sy ny fiompiana maharitra any Menabe, natao ny 23 hatramin’ny 25 septambra teo, tany Morondava, ny Minae sy ny AD2M.Njaka A.L’article Fandaharanasa AD2M: fanjarian-tsakafo any Menabe a été récupéré chez Newsmada.
APIMF manoloana ny Covid: manamaivana ny vesatry ny famerenam-bola ny Acep
Natomboka omaly eto Antananarivo ny herinandron’ireo sampana mpampindram-bola madinika mivondrona ao anaty APIMF (Association professionnelle des institutions de microfinance). Mandritra ny telo andro izy ireo miara-midinika mijery ny tontolo misy azy ireo tao anatin’ny valanaretina sy hitsinjovana ny ho avy. Lohahevitra samihafa novelabelarina amin’izany : manoloana ny Covid, fitsinjovana ny ho avy ao anatin’ny Covid, sy fitaizana olona amin’ny fitantanam-bola.Saika mitovitovy ny fiantraikan’ny valanaretina tamin’ireo mpampindram-bola rehetra, mivondrona ao amin’ny APIMF, nitondran’ny tompon’andraikitra iray fanazavana. « Nandritra ny krizy dia nisedra fahasahiranana ny mpanjifanay, ary nisy fiantraikany taminay Acep. Nitombo efatra avo heny ny tahan’ny olona tra-pahasahiranana amin’ny famerenam-bola », hoy Randriamiarisoa Edouard, tale jeneralin’ny Acep. Koa miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka aminy ny Acep naka fepetra ho fanamaivanana ny vesatry ny famerenam-bola : tsy misy ny sazy, ary tsy miova ny tahan’ny zanabola.« Matoky izahay fa raha misy hatrany ny fifampiresahana, hivaha tsy ho ela ny olan’ny mpandraharaha sy ny mpanjifa ato aminay, misy trosa tsy voaloa 8 miliara ariary », hoy ihany Randriamiarisoa Edouard. Efa miverina amin’ny asany izao ny ankamaroan’ny orinasa madinika sy salantsalany. Mitombo araka izany koa, 25 % ny tahan’ny findramam-bola ao amin’ny Acep. Noho ny Covid ihany anefa, ao ireo sehatrasa marefo tsy afahana mampindram-bola, toy ny fizahantany, ny fitaterana …R.MathieuL’article APIMF manoloana ny Covid: manamaivana ny vesatry ny famerenam-bola ny Acep a été récupéré chez Newsmada.